विपक्षीको छलकपट तथा जालझेलबाट सावधान रहनुपर्नेछ । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्नेछ । सोमवारबाट अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ ।
यो साता कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । मित्र वा आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । साताको उत्तरार्धबाट घर व्यवहारको समस्याले सताउनेछ । प्रतिद्वन्दी हरुले कार्यमा अवरोध ल्याउनेछन् । स्वास्थ्य प्रति सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
यो साता आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । नयाँ–नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । प्रेम जीवन सफल र सुखद् रहने देखिन्छ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । साताको मध्यमा नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् ।
यो साता धर्म, कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । बन्धु बान्धव बाट सहयोग मिल्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ ।
यो हप्ता नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । कसैसँग बोल्दा वा ठट्टा गर्दा सतर्कता अपनाउनुहोला । चोटपटकको भयपनि छ । बुधवारबाट सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ ।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । कृषि कार्यमा प्रगति हुनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शत्रुपनि क्षय होलान् ।
समय निकै उत्साहजनक रहनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ ।
विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । राजनैतिक वा कूटनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । पारिवार सङ्ग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । मध्य सातामा मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ ।
यो साता आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । समाजिक कार्यमा मन जाला । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यसायबाट लाभ मिल्नेछ । दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईंका सकारात्मक विचारलाई समर्थन गर्नेछन् ।
शुभ कार्यको लागि पारिवारिक समर्थन मिल्नेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउला । धर्म, कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्तामा नयाँ कार्यको थालनी र नयाँ योजना बन्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । बुधवारबाट महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ । स्वास्थ्यप्रति सजकता अपनाउनु होला ।
यो साता नसोचेको ठाउँबाट धन हात पर्नेछ । रोकिएका अधुरा कामहररू पुरा हुनेछन् । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ने देखिन्छ । अग्रजहरूको सल्लाह र अनुभव अनुसार कमगरे सफलता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा घर व्यवहारको समस्याले सताउनेछ ।
नेपालमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको निधन, उनीहरु को को हुन् ?
कोरोनालाई नजित्दै चीनमा अर्को रोगको प्रकोप !
भारतमा एकैदिन थपिए आजसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमित, कति पुग्यो मृतकको संख्या ?